Wednesday, 21 Aug, 2019 1:23 PM
४ भदौ, विराटनगर । नेपाली काग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारकै कारण लोकतन्त्र संकटमा पर्ने खतरा बढेको बताएका छन् । दुई तिहाईको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा राजसंस्था र विप्लव समूहले चलखेललाई बढाएको उनको दाबी छ । आज विराटनगरमा रमा–मायादेवी रिजाल पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहमा नेता डा. कोइरालाले भने, ‘सरकारको असफलतासँगै विरोधी तत्वहरुको चलखेल बढेको छ । यसका कारण लोकतन्त्रमाथि संकट आउनसक्छ ।’ सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम गरे अस्थिरता मच्याउने तत्वहरु आफैं निष्कृय हुने उनले बताए । कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी शंकर खरेललाई नगद १५ हजार राशीको रमाप्रसाद–मायादेवी रिजाल पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।